आइसोलेसनबाट हरिवंश आर्चायले गरे अपिल, कोरोना भाइरसबारे गरे यस्तो खुलासा ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/आइसोलेसनबाट हरिवंश आर्चायले गरे अपिल, कोरोना भाइरसबारे गरे यस्तो खुलासा !
शंका बढेपछि हामीले एकैसाथ पीसीआर परीक्षण गरायौं । हुन त त्योभन्दा एक हप्ताअगाडि पनि हामीले पीसीआर गराएका थियौं । त्यसबेला कुनै लक्षण नभए पनि एउटा अस्पतालले हामीलाई ‘रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि थाहा हुन्छ र कोरोना संक्रमण भए/नभएको पनि एकिन हुन्छ’ भनेर बोलाएको थियो । मेरो र मदन दाइको परिवारका सबैजनाले परीक्षण गराउँदा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । त्यसपछिको एक साताभित्र कहाँबाट हामीलाई सं’क्रमण सर्यो भन्नेमा अनभिज्ञ छु ।
रिपोर्ट पोजिटिभ देखिए पनि म डराउन चाहिँ डराइनँ । पहिलो त कडाखालको लक्षण थिएन । अर्को, हामी दुवैलाई कुनै दिर्घरोग थिएन । हामी आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पहिल्यैदेखि सजक छौं । दैनिक एक/डेढ घन्टा आफ्नो शरीरका लागि दिन्छौं । बिहान शारीरिक अभ्यास र मर्निङवाक गर्छौं । खानपिनमा पनि सचेतता अपनाउँछौं । जंक फुडहरु खाँदैनौं । उमेरले धेरै बुढाबुढी भइसकेका पनि छैनौं । त्यसैले पोजिटिभ आयो भने पनि सामना गर्न सकिन्छ भनेर मानसिकरुपमा तयार थियौं ।
भाग्यवस हामीलाई क’डा लक्षण देखिएन । यद्यपि, रिपोर्टले भाइरसको कन्टेन्ट मेरो शरीरमा धेरै देखाएको छ । ल्याबका डाक्टरहरुले पनि मलाई बढी केयर गर्न भन्नुभएको थियो । मेरो नजिकका साथीभाईहरु चिकित्सा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि आवश्यक सल्लाह/सुझाव दिनुभएको थियो । भाइरसको कन्टेन्ट बढी देखिए पनि ममा कडा लक्षण नदेखिनुले मेरो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो नै रहेछ भन्ने महसुस भएको छ ।
मलाई सबैभन्दा बढी चि’न्ता मदन दाइको थियो । उहाँको स्वास्थ्यमा अन्य जटिलताहरु भएकाले कोरोना सं’क्रमण भएको खण्डमा गा’ह्रो पनि हुन सक्थ्यो । हाम्रो रिपोर्ट आएको तीन दिनपछि उहाँले पीसीआर परीक्षण गराउनुभयो । नेगेटिभ रिपोर्ट आयो । त्यसले मलाई ठूलो सन्तोष मिल्यो । मेरा छोरा र बुहारीको पनि नेगेटिभ आयो ।
रिपोर्ट आएपछि हामी पूर्णरुपमा घरभित्र आइसोलेट भएका छौं । घरको माथिल्लो तल्लामा छोरा र बुहारी बस्छन् । हामी श्रीमान/श्रीमती तल्लो तल्लामा बस्छौ। बेग्लाबेग्लै फ्ल्याट भएकाले बसाईको कुनै असुविधा छैन । भान्साकोठा माथिल्लो तल्लामा छ । छोराबुहारीले खाना बनाएर तल ल्याएर राखिदिन्छन् । हाम्रा भाँडाकुँडा छुट्टै छन् । खाइसकेर तलै वाथरुममा सफा गर्छौं । बाहिर निस्किएका छैनौं ।
हाम्रो देशको स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर नै छ । अहिले अस्पतालहरुमा अक्सिजनको अभाव भएको, भेन्टिलेटर भरिएको जस्ता समाचारहरु आइरहेका छन् । त्यसैले यदि कडाखालको सं’क्रमण भयो भने सहज उपचार नपाउने अवस्था हुन सक्छ । तसर्थ, सचेत रहनुको विकल्प छैन । स्वास्थ्य मापदण्डहरु पालना गरेर कडा अनुशासनमा बस्न सबैलाई सुझाव दिन्छु ।
अहिले दिनानुदिन सं’क्रमितहरु बढिरहेका छन् । आगामी दिनहरुमा अझै बढ्ने ख’तरा किन छ भने ठूला चाडपर्वहरु नजिकिएका छन् । हामी नेपालीहरु चाडपर्व मनाउँदा सबै कुरा बिर्सेर फुक्काफाल भएरै मनाउँछौं । तर, यसपालि अवस्था जटिल छ । अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तो घर-घरमा गएर टीका लगाउने परिस्थिति छैन । सकभर सबैले यो दसैं आफ्नै परिवारभित्र सीमित राख्नु उचित हुन्छ । मेरो आफ्नो योजना पनि त्यस्तै छ ।